true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 5 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Ukulungiswa kwezinto ezilungile nokunganaki izinto ezingalungile kuzoletha ukwehluleka kwanoma iyiphi inhlangano noma impucuko.
Uphenyo olunembile luyikhono elibalulekile ukulazi ukuze uthathe izinyathelo ezibucayi zokulungisa okuthile.
Ubulungiswa busho izinqubo zomthetho ezithathwe nguhulumeni noma inhlangano kumuntu lapho ehluleka ukwenza ngokwezifiso zakhe noma ephula umthetho.
Lapho ubulungiswa bungahambi kahle izinto ezenzekile yilezi:
1. Ukusetshenziswa kobulungiswa ngenye injongo kunokuphepha komphakathi, njengokugcina izintshisekelo zeqembu emandleni noma ubandlululo olumilenoma umbono ngomuntu noma okuthile.
2. Ukusetshenziswa okungekho kwenqubo yokuphenya.
Konke ukulimala nokusebenzisa kabi kwamabutho wobulungiswa kwenzeka ngenxa yalokhu.
Kwesinye isikhathi abantu benza izinto ngenxa yokuzonda umuntu noma okuthile bakubize ngokuthi “ubulungiswa” noma “umthetho nokuhleleka.” Kungaleso sizathu ungasho ngokweqiniso ukuthi umphakathi wethu namuhla awunakuthenjwa ngokweqiniso.
Izinto ezinjalo ziletha ukunganakwa kwezinqubo zokuphenya ezihlakaniphile. Kodwa ke, impumelelo yanoma yiliphi iqembu incike ezinqubeni ezifanele zokuphenya ezenziwe ngendlela eqaphelekayo neqondayo. Kungaleyondlela kuphela lapho ongathola khona izimbangela eziyiqiniso zezimo ezimbi. Futhi ngokuthola kuphela ukuthi imbangela yangempela yini ungenza okuthile ngakho.
Kuyinto eyodwa ukwazi ukuqaphela. Kuyinto engenye futhi ukusebenzisa lokho okuqashelwayo ukuthola isizathu sokuthi kukhona isimo esibi.
Uphenyo luyadingeka lapho ubona ama-outpoints noma ama-plupoints.
Uphenyo lungenzeka ngenxa yelukuluku eliyize noma ngenxa yesithakazelo esithile entweni ethile. Lungenzeka futhi ukuze kutholakale imbangela yama-pluspoints.
Noma ngabe yisiphi isizathu sokuphenywa, isenzo sokuphenya okuthile senziwa ngokulandela ukulandelana.
Uma umuntu engakwazi ukulandela ngokomqondo uchungechunge lwezehlakalo noma isenzo, ngeke akwazi ukuphenya ngokufanele okuthile.
I-outpoint yokulandelana okuguquliwe kuyindlela esemqoka yokuphenya.
Ukubheka kokuqala, i-outpoint yedatha eshiyiwe ingahle ibonakale iyibhlokhi. Kodwa eqinisweni idatha ekhishiwe ingumkhiqizo wokugcina wophenyo futhi wenza ukuthi uphenyo luqhubeke kuze kube sesiphethweni—ufuna idatha esele.
Ukulandelana kwezenzo okuguquliwe kwehlula noma yikuphi ukuphenya. Njengesibonelo, omunye umuntu uthi “Sizomlengisa bese sibanecala.” Noma “Sizocabanga ukuthi ngubani owenze lobugebengu bese sithola ubufakazi bokukufakazela lokho.” Noma “Ubugebengu kufanele benziwe ngamabomu ukuze kutholwe ukuthi obani ababenzayo.” Lokhu kwenziwe uphenyo ubuyela emuva. Noma yisiphi isikhathi lapho kwenziwa uphenyo ngendlela ebuyela emuva kanjena, ngeke luphumelele.
Ngakho ke uma umuntu owenza uphenyo eba nenkinga yokubona noma efanekisa engqondweni yakhe ukulandelana kwezenzo, nakanjani uzoza nempendulo engalungile.
Uma ubona ukuthi othile ufike nempendulo engalungile noma engaphelele yenkinga ethile, ungafunga ukuthi umuntu ophenyayo unenkinga ngokulandelana kwezigameko noma, empeleni, akazange enze uphenyo ngempela.
Akekho ongakholelwa impela ukuthi umphenyi wamanga u-Sherlock Holmes uyoke athi, “Ngine-print yomunwe kaMnumzane u-Murgatroyd kwisikhali sokubulala. Amaphoyisa ake ambompe. Manje, Watson, nginike ingilazi ekhulisayo bese ucela u-Detective Doherty ukuthi asivumele sibheke amafayili akhe awama-print eminwe.” Lesi ngesinye isibonelo sokuphenya okubuyela emuva.
Ngakho ke uma umuntu engakwazi ukubona ngeso lengqondo (isithombe) uchungechunge lwezenzo, kufana nebhola elishayisa phansi izitebhisi, noma uma umuntu engakwazi ukuxoxa ngokulandelana kwezenzo eziningana ezihlukene nento eyodwa ngokulandelana okufanele, ngeke akwazi ukuphenya.
Uma umuntu ekwazi, uzophumelela ekuphenyeni okuthile.
Konke ukwenza ngcono impilo kuncike ekutholeni ama-plupoints nokuthi kungani futhi kugcizelelwa (kuzenza ziqine) futhi kutholakale ama-outpoints futhi uthole ukuthi kungani futhi ziqondwa.
Lokhu kuyiphethini yokusinda ephumelele yokuphila. Umuntu ophila emphakathini obuyela emuva njengehlathi lase-Amazon ozosinda wenza lokho nje. Usosayensi owaziyo ibhizinisi lakhe naye wenza lokho nje.
Isibonelo, nakhu ukulandelana okulandela i-pluspoint: Umdobi ubona ama-gulls olwandle ziqoqana endaweni ethile olwandle. Lokho kungukuqala kokulandelana okufushane, iphuzu inombolo yokuqala. Yena ubikezela isikole senhlanzi, iphuzu inombolo yesibili. Yena uhamba njengoba kulandelana iphuzu inombolo yesithathu. Yena ubheka phansi njengokulandelana iphuzu inombolo yesine. Yena ubona izinhlanzi njengezinombolo eziyisihlanu. Yena ukhipha inetha njengephuzu inombolo yesithupha. Yena uzungeza isikole ngenethi, inombolo yesikhombisa. Yena udonsela inethi, inombolo yesishiyagalombili. Yena uletha izinhlanzi ebhodini, inombolo yesishiyagalolunye. Yena uya echwebeni, inombolo yeshumi. Yena uthengisa izinhlanzi, inombolo yeshumi nanye. Lokho kulandela i-pluspoint—ukuhlangana kwezihlakala zolwandle.
Futhi njengesinye isibonelo, ukulandelana okuqala kwi-outpoint kungaba yile: Unkosikazi wasendlini udla isidlo sakusihlwa. Akekho odla ikhekhe, inombolo yokuqala. Yena uyayinambitha, inombolo yesibili. Yena ubona insipho kuyona, inombolo yesithathu. Yena uya ekhishini, inombolo yesine. Yena ubheka kubhasikidi, inombolo yesihlanu. Yena uthola ibhokisi lensipho lingqongqiwe, inombolo yesithupha. Yena ubona ufulawa ongezansi kwawo, inombolo yesikhombisa. Yena ubona ukuthi imbiza yamakhukhi ayinalutho, inombolo yesishiyagalombili. Yena ubamba indodana yakhe encane, inombolo yesishiyagalolunye. Yena uyamkhombisa ukuthi uthole ini, inombolo yeshumi. Yena uthola ukuvuma izono, inombolo yeshumi nanye. Futhi inombolo yeshumi nambili ibuhlungu kakhulu ukuyichaza.
Konke okutholakele kungumkhiqizo wokugcina wokulandelana kwezenzo zokuphenya eziqala nge-pluspoint noma nge-outpoint.
Ngakho ke lonke ulwazi luqala ngama-pluspoints noma ngama-outpoints aqapheliwe.
Futhi lonke ulwazi luncike kwikhono lokuphenya.
Futhi lonke uphenyo lwenziwa ngokulandelana okuyikho.
Futhi yonke impumelelo incike kwikhono lokwenza lezi zinto.